ODUU GADDISIIFTUU……….. - Welcome to bilisummaa
Innaa lillaahi wa innaa ileyhi raaji’uun !!!!
guyyaa dheengaddaa barsiisaan SHEIKH AMIIN IBROO (sheikh Aadam caffee) du’aan Addunyaa tanarraa galanii jiran !!!!
Innaa lillaahi wa innaa ileyhi raaji’uun…… yaa rabbi !!! rahmata isaaniif godhi, yaa rabbi jannataan isaan badhaasi, yaa rabbi ollaa nabiyyii keetii isaan qubsiisi !!!!
Oduu gaddisiiftuiu tana osoo dhageysuu yoo (innaa lillaahi wa innaa ileyhi raajiuun) hin ja’in hedduu nama dinqisiiftaa beeki !!!!
Previous Stop Clearing Oromo from their Land in the name of boosting economic development
Next Ethiopia: Raya under destruction